Taariikhda Webka iyo Falanqaynta Bulshada | Martech Zone
Talaado, Juun 21, 2011 Arbacada, Oktoobar 26, 2011 Douglas Karr
Waxaan jecel nahay faahfaahinta… iyo haddii aadan ogaan, hadda waxaan haysannaa qayb kaliya oo loogu talagalay Infographics (oo ay weheliso iyada u gaar ah feed). Waxaan aad u jecelahay sawir-gacmeedka oo aan bilownay inaan horumarinno midkeenna iyo sidoo kale qaar ka mid ah la-hawlgalayaashayada iyo macaamiisheena. Kani waxaa loo sameeyay macmiilkayaga, Webtrends, waxayna siisaa taariikh baraha bulshada Analytics iyo falanqaynta webka.
Haddii aad jeceshahay inaad ku wadaagto macluumaadkan boggaaga, waxaad haysataa oggolaansho buuxda illaa iyo inta aad ka bixinayso xiriiriye dib ugu noqo qoraalkan iyo Webtrends. Xogtan waxaa soo saaray hay'addeena, DK New Media.
Suuqgeynta Suuq geynta guryaha
Qabasho weyn, Marco! Astaanta Netscape soo socota 🙂
Ma qori kartaa ilahaaga? Taasi waa inay noqotaa dhaqan caadi ah marka la abuurayo qaab muuqaal ah.
Jun 25, 2011 saacadu markay ahayd 2:11 AM
Taasi waxay u egtahay sawir-gacmeedka keena tirakoobka. Si kastaba ha noqotee, kani maahan xog-ururin ama xisaabsan oo u baahan xaqiijin. Liiska kheyraadka ayaa ka dheereyn lahaa Infographic laftiisa. Haddii aad aqriso shay kasta, waxaad ogaan doontaa inaan tixraacno isha meesha looga baahdo (Wikipedia, Gartner, Magaca shirkadda, iwm). Hubi sidoo kale taariikhda websaydhada shirkadda.
Agoosto 1, 2011 saacaddu markay ahayd 8:53 PM
Wax yar oo sax ah uun FYI, XiTi (oo hadda ah Internetka) wuxuu bilaabay 1997, maahan 2004
Agoosto 1, 2011 saacaddu markay ahayd 9:03 PM
Diirad saarida ma aysan aheyn bilaabista shirkadda laakiin waxay ahayd barta falanqaynta ee la sii daayay.